Yenziwe yasebenza ukhetho lokukhangela ingoma phakathi koluhlu lokudlala kwi-iOS 15.2 | Iindaba ze-iPhone
Yenziwe yasebenza ukhetho lokukhangela ingoma phakathi koluhlu lokudlalwayo kwi-iOS 15.2
Inguqulelo entsha ye-beta ye-iOS 15.2 eqaliswe kwiiyure ezimbalwa ezidlulileyo yongeza uthotho lwezinto ezintsha ezilindelwe kakhulu ngabasebenzisi kwaye kukuba ukongeza kwizinto ezintsha kwi-r.ukuqondwa kwelizwi labasebenzisi yeHomePod, inguqulelo entsha ye-beta ye-iOS nayo yongeza utshintsho kuMculo weApple kunye noluhlu lokudlala.
Ngale ndlela, into esinayo etafileni ngolu phuculo lwe-Apple Music lukhetho Khangela ingoma ngqo kuluhlu lokudlala, oko kukuthi, ukukwazi ukufumana loo ngoma ngaphakathi kuluhlu enkosi kwi-injini yokukhangela edibeneyo evela phezulu.
Inketho yokukhangela iingoma kuluhlu lwe-Apple Music ngoku ikwi-beta
Olu khetho lufihliwe ngandlel 'ithile kuguqulelo olutsha lwe-beta kwaye kwabo bane-iOS 15.2 beta efakiweyo kwaye baneakhawunti yobhaliso ye-Apple Music, banokuzama olu khetho lutsha lokufumana ingoma kuluhlu. Okufuneka ukwenze kukufikelela kuluhlu lokudlalayo olufunayo, yenza "skrola" ezantsi ukuze ukhetho lokukhangela luvele phezulu kwe-iPhone. Apho sinokukhetha ukufumana isihloko esithile kuluhlu.
Sinokuthi olu khetho lokukhangela kufuneka luphunyezwe ixesha elide kuba kuyinto esisiseko ukufumana isihloko esisithandayo kulo naluphi na uluhlu lokudlala. Oku akuthethi ukuba inkonzo yoMculo we-Apple kufuneka iphucule kancinci, kodwa apha "ingcono kade kunokuba ingazange" iphumelele. Ngeli xesha iinketho ezikhoyo zokukhangela isihloko esithile sele zisebenza kwisicelo, siyathemba ukuba ziya kuqhubeka nokuphucula ezinye iinkalo kwi-Apple Music. Ukuba akukho lutshintsho olungakumbi olu khetho Iza kufika ngokusemthethweni xa i-iOS 15.2 ikhutshwa ngaphambi kokuphela konyaka.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Iimveliso ze-Apple » Apple Music » Yenziwe yasebenza ukhetho lokukhangela ingoma phakathi koluhlu lokudlalwayo kwi-iOS 15.2
I-Hohem iSteady X, igimbal enexabiso eliphantsi, icwecwe kwaye iyasebenza kakhulu
I-Afterparty, umdlalo ohlekisayo oyimfihlakalo wokubulala, iqala nge-28 kaJanuwari kwi-Apple TV +